Exoplanets: ती के हुन्, आविष्कारका विशेषता र विधिहरू नेटवर्क मौसम विज्ञान
जब हामी सबै ग्रहहरूको विश्लेषण गर्दछौं सौर्य प्रणाली हामी त्यहाँ दुबै छन् भनेर देख्छौं भित्री ग्रहहरू जस्तै बाहिरी ग्रहहरू। यद्यपि त्यहाँ बिभिन्न अन्तरिक्ष मिशनहरू छन् जुन सौर्य प्रणाली भन्दा बाहिरका ग्रहहरूको खोजीमा समर्पित छन्। हाम्रो सूर्य को क्षेत्र को सीमा बाहिर खोजिएका ग्रहहरु को रूप मा चिनिन्छ exoplanets.
यस लेखमा हामी तपाईंलाई ती सबै कुरा भन्न जाँदैछौं जसलाई तपाईंलाई एक्जोप्लेनेटहरू बारे जान्नु आवश्यक छ र तिनीहरूलाई पत्ता लगाउन के विधिहरू प्रयोग गरिन्छ।
1 Exoplanets के हो?
3 Exoplanets खोजी गर्न विधिहरू
Exoplanets के हो?
त्यहाँ सौर्य प्रणाली भन्दा बाहिर एक्स्पप्लेनेटहरू खोज्न प्रयास गर्ने असंख्य प्रोजेक्टहरू छन्। यो शब्दले सौर्य प्रणाली भन्दा पर अवस्थित ग्रहहरू बुझाउँदछ, जबकि कुनै आधिकारिक परिभाषा छैन जुन विशेष सुविधाहरू पूरा गर्दछ। एक दशक भन्दा बढी अघि अन्तर्राष्ट्रिय खगोल संघ (IAU, अंग्रेजीमा) ले ग्रह र बौने ग्रहको सर्तलाई राम्रोसँग परिभाषित गर्न सक्षम हुन केही भिन्नताहरू देखाएको छ। जब यी नयाँ परिभाषा स्थापना गर्दछ प्लूटो आधिकारिक रूपमा ग्रह मानिएन र यसलाई बौने ग्रहको रूपमा वर्णन गरिएको थियो।
दुबै अवधारणाले सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने आकाशीय पिण्डहरूलाई जनाउँछ। तिनीहरूलाई समेट्ने सामान्य विशेषता यो हो कि उनीहरूसँग पर्याप्त मात्रा छ ताकि उनीहरूको आफ्नै गुरुत्वाकर्षणले कठोर शरीरको शक्तिहरूलाई जित्न सकोस् ताकि उनीहरूले हाइड्रोस्टेटिक सन्तुलन प्राप्त गर्न सकून्। यद्यपि हामीले अघि नै उल्लेख गरिसक्यौं, एक्स्पोलेट्सको परिभाषासँग उस्तै हुँदैन। सौर्य प्रणाली भन्दा पर फेला परेका ग्रहहरूसँग समानताका विशेषताहरूमा आजसम्म सहमति छैन।
प्रयोग को सजिलो को लागी, यसले सौर प्रणाली बाहिरका सबै ग्रहहरु को रूप मा exoplanets बुझाउँछ। त्यो पनि हो तिनीहरू एक्स्ट्रासेलर ग्रहको नामबाट चिनिन्छन्।
यी ग्रहहरूलाई परिभाषित गर्न, भेला गर्न र वर्गीकृत गर्न एक सहमति स्थापना हुनुपर्दछ, साझा विशेषताहरू स्थापित गर्न आवश्यक छ। यस तरीकाले, IAU ले तीन विशेषताहरू संकलन गर्‍यो जुन एक्सपप्लानेटहरूले हुनुपर्दछ। हामी यी तीन गुणहरू के हुन् हेरौं:
ती वस्तुहरू ड्युटेरियम आणविक फ्यूजनको लागि सीमित जनमुनि एक वास्तविक द्रव्यमान साथ वस्तुहरू हुनेछन्।
एक तारा वा तारकीय शेष को चारैतिर घुमाउनुहोस्।
सौर्यमण्डलमा ग्रहको लागि सीमाको रूपमा प्रयोग गरिएको भन्दा बढी मास र / वा साइज प्रस्तुत गर्नुहोस्।
अपेक्षित रूपमा, सौर्य प्रणाली बाहिर र भित्र रहेका ग्रहहरू बीच तुलनात्मक विशेषताहरू स्थापित हुन्छन्। हामीले समान सुविधाहरू हेर्नुपर्दछ किनकि सबै ग्रहहरू प्राय: केन्द्रीय ताराको वरिपरि परिक्रमा गर्दछन्। यस तरिकाले, "सौर्य प्रणालीहरू" एकै साथ सिर्जना गरिन्छ हामी जे आकाशगंगाको रूपमा चिन्छौं उत्पन्न गर्नका लागि। यदि हामी स्पेनिश शाही एकेडेमीको शब्दकोषमा हेर्छौं भने हामी बुझ्दछौं कि शब्द एक्लोप्लानेट समावेश गरिएको छैन।
पहिलो एक्सप्लानेट एक शताब्दी भन्दा पहिले पत्ता लागेको थियो। र यो यो हो कि १ 1992 XNUMX २ मा धेरै खगोलविद्हरूले लिचको नामले चिनिने एक ताराको वरिपरि घुम्ने ग्रहहरूको श्रृंखला भेट्टाए। यो तारा एकदम विशेष छ कि यो धेरै छोटो अनियमित अन्तराल मा विकिरण उत्सव।। तपाईं भन्न सक्नुहुनेछ कि यस ताराले कार्य गरे जस्तो गरी यो एक बीकन हो।
यसको धेरै बर्ष पछि, दुई वैज्ञानिक टोलीहरूले सूर्यको जस्तो मिल्दोजुल्दो ताराको वरिपरि घुम्ने पहिलो एक्सप्लानेट भेट्टाए। यो खगोल खगोल विज्ञानको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण थियो किनकि यसले हाम्रो सौर्यमण्डलको बाहिरी ग्रहहरू अस्तित्वमा रहेको देखायो। थप रूपमा, ग्रहहरू छन् जुन हाम्रो जस्तो सिताराहरूको कक्षामा जान सक्दछ। त्यो हो, अन्य सौर प्रणालीहरू अवस्थित हुन सक्छ।
त्यस पछि, टेक्नोलोजीको सुधारको साथ, cie समुदायntifica नयाँ ग्रहहरु को खोज मा विभिन्न अभियानहरु मा हजारौं exoplanets पत्ता लगाउन सक्षम भयो। सबै भन्दा राम्रो परिचित केप्लर टेलिस्कोप हो।
Exoplanets खोजी गर्न विधिहरू
किनकि यी एक्सप्लनेटहरू शारीरिक रूपमा पत्ता लगाउन सकिदैन, त्यहाँ सौर्य प्रणाली भन्दा टाढाका ग्रहहरू पत्ता लगाउन बिभिन्न तरिकाहरू छन्। हेरौं विभिन्न विधिहरू के हुन्:
ट्रान्जिट विधि: यो आजको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रविधि हो। यस विधिको लक्ष्य ताराबाट आउने चमक मापन गर्नु हो। तारा राजा र पृथ्वीको बिचमा एक्स्पोलानेट बित्छ ताकि प्रकाश हामीमा पुग्ने समय अवधिमा घट्नेछ। हामी अप्रत्यक्ष रूपमा अनुमान लगाउन सक्छौं कि एक एक्स्ट्रासोलर ग्रह त्यो क्षेत्रमा अवस्थित छ। यो पद्धति धेरै सफल भएको छ र यो हालको वर्षहरूमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग भएको छ।
एस्ट्रोमेट्री: यो खगोल विज्ञान को एक शाखा हो। यो स्थान र ताराहरूको उचित आन्दोलनको विश्लेषणको लागि अधिक जिम्मेवार हुनेछ। एस्ट्रोमेट्रीद्वारा सबै अध्ययनहरूका लागि धन्यवाद, ताराहरू परिक्रमा गरेको ताराहरूमा प्रयोग गरेको सानो गडबडी मापन गर्ने प्रयास गर्दै एक्स्पप्लेनेटहरू पत्ता लगाउन सम्भव छ। यद्यपि आजसम्म कुनै पनि एक्स्ट्रासेलर ग्रह एस्ट्रोमेट्रीको प्रयोगले फेला परेन।
रेडियल वेग ट्र्याकिंग: यो एक यस्तो प्रविधि हो जुन तारा सानो माटोमा कती चाँडो सर्छ भनेर मापन गर्दछ जुन एक्सप्लानेटको आकर्षणबाट उत्पन्न हुन्छ। यस तारा हामीबाट टाढा सर्दछ जब सम्म यो आफ्नो कक्षा पूरा गर्दैन। हामी दृश्य रेखा को सितारा पक्ष को गति गणना गर्न सक्छौं यदि हामी भूमिबाट एक पर्यवेक्षक छ। यो गति रेडियल गति को नाम बाट परिचित छ। वेगमा यी सबै सानो भिन्नताहरूले स्टारग्याजि spect स्पेक्ट्रममा परिवर्तन गर्दछ। त्यो हो, यदि हामीले रेडियल वेग ट्रयाक ग we्यौं भने हामीले नयाँ एक्सपप्लेटहरू पत्ता लगाउन सक्छौं।
पल्सर कालक्रमिती: पहिलो एक्स्ट्रास्लर ग्रहहरू एक पल्सरको वरिपरि घुमायो। यो पल्सर स्टारलाईटको रूपमा चिनिन्छ। तिनीहरूले अनियमित छोटो अन्तरालहरूमा विकिरण उत्सर्जन गर्छन् जस्तै यो एक लाइटहाउस हो। यदि एक एक्स्प्लानेट ताराको वरिपरि घुम्छ जुन यी सुविधाहरू छन् भने, हाम्रो ग्रहमा पुग्ने प्रकाशको किरणलाई असर गर्न सकिन्छ। यी विशेषताहरूले हामीलाई पल्सार वरिपरि घुम्ने नयाँ एक्सोप्लानेटको अस्तित्व थाहा पाउनको लागि दृष्टिकोणको रूपमा सेवा गर्न सक्दछ।
म आशा गर्दछु कि यस जानकारीको साथ तपाईले एक्लोप्लेनेट र कसरी पत्ता लगाइन्छ भन्ने बारे अझ बढी जान्न सक्नुहुन्छ
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » Exoplanets